पुष २५, २०७८ बलिराम यादव
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा एक महिना अगाडी मात्र नयाँ प्रहरी प्रमुखका रुपमा रमेश कुमार बस्नेत आएका छन् । मुलुकको प्रमुख नाका र खुल्ला सीमाका रुपमा रहेको पर्सा जिल्ला केन्द्रको दृष्टिकोणमा समेत निकै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । आर्थिक गतिविधि बढि हुने भएकोले पनि यो जिल्लामा आर्थिक र सम–सामयिक अन्य बिषयमा पनि अपराध जोडिने गरेको छ । त्यस्ता अपराध न्यूनिकरण गर्न पछिल्लो पटक पर्सा प्रहरीले कस्ता कार्यहरु गरिरहेको छ ? भनी भर्खरै जिल्लामा आएका प्रहरी उपरिक्षक रमेश कुमार बस्नेतसँग जिल्लाको सुरक्षाको बिषयमा गरिएको बिशेष कुराकानी :-
१) पर्सामा अपराधिक क्रियाक्लाप नियन्त्रण गर्न के गर्दै हुनु कुन्छ ?
हाम्रो संगठनको १४ बुँदे कार्य योजना टेकेर काम गरिरहेका छौ । अपराध अनुसन्धान र कानुन यी दुईको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो जीम्मेवारी हो । तसर्थ पहिलो काम भनेको अपराध अनुसन्धान गर्ने । कुनै पनि किसिमको जघन्य अपराध भएको छ भने त्यसको अनुसन्धान गरी कानूनी कायन्वयन गर्नु हो । अहिले लागु औषधको सेवनकर्ता र बिक्रि वितरण गर्नेहरु बढी पक्राउ परिरहेका छन् । लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट पनि भएको हुनाले लागुऔषध अलि धेरै बरामद भएको छ ।
२) जिल्लामा कस्तो किसिमको अपराधिक गतिविधी बढि हुने गरेको छ ?
हाम्रो तथ्याङ्क हेर्दा अहिले सबैभन्दा बढी (७०–७५प्रतिशत) लागु औषधकै घटनाहरु छन् । त्यसपछि बैंकिङ्ग कसुर र बलात्कारका घट्नाहरु छन् । २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएकोले पनि बलात्कारका घट्नाको मुद्दा बढी दर्ता हुने गरेको जस्तो छ ।
३) लागु औषध सेवन र कारोबारमा खास गरी युवाहरुको संलग्नता बढि देखिन्छन् किन ?
युवाहरु साथीसंगतकै कारण लागु औषध जस्ता अपराधिक क्रियाकपालमा लाग्छन् । सिमाना नजिक भएकोले आउन जान पनि सजिलो हुने हुँदा युवाहरु यसमा फसेका छन् । अहिले पर्सामा पनि बाहिरका मानिसहरु बढी पक्राउ परिरहेका छन् । १०७ किलोमिटर सिमा क्षेत्र खुल्ला भएको हुँदा यहाँबाट बढी लागु औगाध कारोबार हुने गरेको देखिन्छ ।
४) लागु औषध सेवन र कारोबारमा संलग्न युवा जमातलाई न्यूनिकरण गर्न प्रभावकारी काम के हुन सक्छ ?
सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय, कलेजमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । त्यस्ता सचेतना मूलक कार्यक्रमलाई अझ बढोत्तरी दिने मेरो योजना छ । अर्को, चेलीबेटी बेचबिखन, वालविवाह, जस्तै २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउँने कानुनी प्रावधानको अनविज्ञताको कारणले पनि अपराधको तथ्याङ्क वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसकारण सामुदायिक प्रहरी मार्फत स्कुल, कलेज गाउँ टोलटोलमा सचेतना कार्यक्रमलाई पु¥याउनु पर्छ । कानुनी अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन । यो देशमा हुँनेले यहाँको सबै कानुन बारे जान्नु पर्छ । २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नु वा गराउनु हुँदैन । स्थानीय र सम्बन्धित गाउँको वडा कार्यालयसंग समन्वय गरी गाउँगाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौ र गर्ने छौ ।
५) पर्सामा पछिल्लो ३/४ दिनमा ३ वटा शव भेटियो ?
अनुशन्धान भईरहेको छ । अनुशन्धान पछि थप कुरा खुल्ने छ ।
६) पर्सा जिल्ला खुल्ला सिमाना हो, यहाँ बालुवादेखी पोके तस्करी सम्म हुने गरेको छ ? नियन्त्रण कसरी गर्नु हुन्छ ?
सबै ठाउँको सिमा नाकामा लाग्ने आरोप हो यो । कतिपयले हातमुख जोड्नका लागि पनि यो काम गरिरहेका हुन्छन् । तस्करी धन्दालाई एकदमै कडाइ गरिएको छ । कोही कसैले लुकिछिपी गरिरहेको छ भने पनि प्रहरीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने छ । गलत कार्य गर्ने लामो समयसम्म उम्किन सक्ने छैन । म यहाँ आएको महिना दिनमै करिब २ करोड ५० लाखभन्दा बढीको भन्सार छलीका सामान बरामद गरिसकेका छौं । त्यो तस्करी नियन्त्रण गर्ने कामको प्रतिफल नै हो ।
७) पर्सा प्रहरी तस्करदेखि सीमा आवत जावतको सुरक्षामा समेत सक्षम हुन नसकेको आरोप छ नि ?
त्यो त डाटाले देखाउने हो नि । पहिले कति थियो र अहिले कति छ ? हामीले समातेको सामान घरमा लाने होइन । भन्सार र राजशवमा बुझाउने हो । हामीले नियन्त्रणमा लिएका ती चिजहरु त देखिरहेको छ नि ।
८) तपाईको मातहतका प्रहरीहरुको तस्करहरुसँग उठबस बाक्लो छ । प्रमुखको नाताले तपाई अछुतो हुनुहुन्छ कसरी भन्ने ?
त्यस्तो त छैन । तर गर्न नहुने काम कुनै प्रहरीले गरे कानुन बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ । प्रहरीलाई त दण्ड र पुरस्कार दुवैको व्यवस्था छ । हामी फौजी संगठनका मानिस हौ । जसले अनुशासनहीन काम गर्छ । त्यसलाई त निश्चित रुपमा प्रहरी नियमावली र प्रहरी ऐनले दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको छ । कानुन मिच्ने प्रहरीलाई त्यही अनुसारको कारवाही हुन्छ ।
९) राजश्व छली अर्थतन्त्रलाई धवस्त पार्ने माफियाहरुलाई तह लगाउन पर्सा प्रहरीले थप कस्तो रणनीति बनाउँदै छ ?
यसमा चाहिने सूचना हो । कहि कतैबाट कसैले गर्न नहुने काम गरिरहेको भने सूचना चाही प्रहरी सम्म आउनु पर्छ । त्यसको लागि प्रहरीको टोल फ्रि नं. १०० राखेका छौ । जुनसुकै बेला फोन गर्न सक्नु हुन्छ । यसमा कुनै शुल्क लाग्दैन । कोही कसैसंग केही जानकारी छ भने हामीलाई सूचना दिनुस् । प्रहरीले आवश्यक कदम चालेर देखाउँछ ।
१०) प्रहरीसंग सिधै आउन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि के सुझाव दिनु हुन्छ ?
प्रहरी सेना भनेको सर्विस नलाग्ने सेवा भित्र पर्दछ । त्यसकारण कोही बिचौलिया लिएर आइरहनु पर्दैन । प्रहरीका पर्सा जिल्लामा मात्र ७१ वटा यूनिट छन् । जुनसुकै युनिटमा गए पनि आफूलाई परेको पीरमर्काको बारेमा गुनासो अथवा उजुरी दिन सक्नु हुन्छ । त्यहाँ भएन भने यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सिधै पनि आउन सकिन्छ । तसर्थ दुःख, पिर, मर्का परेका मानिसहरुले सहेर बस्ने होइन । प्रहरीसम्म आउन कसैलाई लिएर आउनु पर्दैन । सिधै आए हुन्छ ।
११) चिसोबाट हुने विपदको व्यवस्थापन तयारी चाही कसरी गरिरहनु भएको छ ?
केही दिन पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको निर्णय अनुसार विपद् व्यवस्थापन समिति कोषमा भएको रकमले न्यानो कपडा खरिद गरी गरिब तथा विपन्नलाई वितरण गर्दै आएका छौ । डिभिजन वन कार्यालयसंग समन्वय गरी दाउराहरु पनि ल्याइएको छ । ठाउँठाउँमा दाउरा वितरण गरी आगो पनि बाल्न थालेका छौं । सामुदायिक प्रहरीले वीरगञ्जको इनर्वा लगायतका ठाउँमा ३ सयभन्दा बढी गरिब तथा विपन्न परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण गरिसकेको छ । अन्य ठाउँमा पनि हुँदैछ ।
१२) ओमिक्रोन भेरियन्टको प्रभाव नेपालमा प्रवेश गर्न नदिन सीमा नाकामा सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ ?
वीरगन्जको इनर्वा नाका शंकराचार्य गेट स्थित प्रहरी युनिटकै छेउमा हेल्प डेक्सको स्थापना गरिएको छ । त्यहाँ डाक्टर सहितको टोली छ । भारत लगायत अन्य मूलुकहरुबाट आउने मानिसहरुको त्यही चेक जाँच हुन्छ । केही दिन पहिले कलकत्ताको टुरिस्टहरुमा रुघाखोकी, ज्वरो जस्ता लक्षण र संक्रमण देखिदाँ हामीले फर्काएको थियो । त्यसपछि आगामी दिनमा पर्साको ग्रामिण भेगका नाकाहरुमा पनि हेल्पडेक्स राख्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यता तर्फ पनि हामी सचेत भइरहेका छौं ।
#प्रहरी उपरिक्षक रमेश कुमार बस्नेत
आइतवार, पुष २५, २०७८, ११:०१:००
पुष ४, २०७८ बलिराम यादव
पुष १, २०७८ बलिराम यादव